သူတို့ရဲ့ ကွိုကျနှဈသကျမှုအနညျးဆုံး သီခငျြးကို ဖှငျ့ဟပွောဆိုလာတဲ့ Backstreet Boys အဖှဲ့။ – SoShwe
Home/Entertainment/သူတို့ရဲ့ ကွိုကျနှဈသကျမှုအနညျးဆုံး သီခငျြးကို ဖှငျ့ဟပွောဆိုလာတဲ့ Backstreet Boys အဖှဲ့။
သူတို့ရဲ့ ကွိုကျနှဈသကျမှုအနညျးဆုံး သီခငျြးကို ဖှငျ့ဟပွောဆိုလာတဲ့ Backstreet Boys အဖှဲ့။
admin June 13, 2020	Entertainment Leaveacomment
နှဈပေါငျးမြားစှာ အဖှဲ့တဈခုအဖွဈရပျတညျ၍ ဖြျောဖွတေငျဆကျလာတဲ့ Backstreet Boys အမြိုးသားအဖှဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျကို ပုရိသတျတှအေကွား ကှယျပြောကျစခေငျြတဲ့အကွောငျး ဖှငျ့ဟ ပွောဆိုလာပါတယျ။
အဖှဲ့ဝငျတှဖွေဈတဲ့ နဈ ကာတနျ၊ ကယျဗငျ ရဈခကျြဆနျ၊ ဘရိုငျယနျ လဈတရယျ၊ အဂျြ မကျလငျးနဲ့ ဟောငျဝီ ဒရို့တို့ကို DNAuary အဖှဲ့အစညျးမှ သူတို့ အဖှဲ့ဝငျတှေ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျကွား ထငျမွငျယူဆခကျြတှနေဲ့ အဖှဲ့မှာ ဟာသညဏျအရှငျဆုံး ဘယျသူဖွဈမလဲဆိုတဲ့အကွောငျး မေးမွနျးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတဈခုကို Youtube ပျေါ တငျခဲ့ပါတယျ။
အဖှဲ့ဝငျ (၅) ယောကျရဲ့ အဖွတှေကေလညျး အမြိုးမြိုးကှဲပွားခဲ့ပွီး တူညီတဲ့အခကျြတဈခကျြကတော့ သူတို့ရဲ့ ကွိုကျနှဈသကျမှု အနညျးဆုံး သီခငျြးပဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ကွိုကျနှဈသကျမှုအနညျးဆုံး သီးခငျြးကတော့ “ If You Want It To Be Good Girl (Get Yourself A Bad Boy) ” ဆိုတဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ဒုတိယမွောကျ အလျဘမျထဲက သီခငျြးပဲဖွဈပါတယျ။
ထိုသီခငျြးပျေါမူတညျ၍ အဖှဲ့ဝငျတှအေား မေးမွနျးရာ ရဈခကျြကတော့ “ လုံးဝ ကွိုကျနှဈသကျခွငျး မရှိပါဘူး . . . ” ဆို၍ ဖွခေဲ့ပွီး မကျလငျးကတော့ “ အရမျးကို စိတျပကျြစရာကောငျးတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈပွီး၊ မဆိုခဲ့သငျ့တဲ့ သီခငျြးပဲဖွဈပါတယျ. . . ” ဆိုပွီး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုအနည်းဆုံး သီချင်းကို ဖွင့်ဟပြောဆိုလာတဲ့ Backstreet Boys အဖွဲ့။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်၍ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်လာတဲ့ Backstreet Boys အမျိုးသားအဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ပုရိသတ်တွေအကြား ကွယ်ပျောက်စေချင်တဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောဆိုလာပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ နစ် ကာတန်၊ ကယ်ဗင် ရစ်ချက်ဆန်၊ ဘရိုင်ယန် လစ်တရယ်၊ အဂ်ျ မက်လင်းနဲ့ ဟောင်ဝီ ဒရို့တို့ကို DNAuary အဖွဲ့အစည်းမှ သူတို့ အဖွဲ့ဝင်တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြား ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ အဖွဲ့မှာ ဟာသညဏ်အရွှင်ဆုံး ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်း မေးမြန်းထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို Youtube ပေါ် တင်ခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင် (၅) ယောက်ရဲ့ အဖြေတွေကလည်း အမျိုးမျိုးကွဲပြားခဲ့ပြီး တူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှု အနည်းဆုံး သီချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုအနည်းဆုံး သီးချင်းကတော့ “ If You Want It To Be Good Girl (Get Yourself A Bad Boy) ” ဆိုတဲ့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက် အလ်ဘမ်ထဲက သီချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသီချင်းပေါ်မူတည်၍ အဖွဲ့ဝင်တွေအား မေးမြန်းရာ ရစ်ချက်ကတော့ “ လုံးဝ ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း မရှိပါဘူး . . . ” ဆို၍ ဖြေခဲ့ပြီး မက်လင်းကတော့ “ အရမ်းကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး၊ မဆိုခဲ့သင့်တဲ့ သီချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်. . . ” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Previous ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ လန်ပြန်ထွက်နေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်များ။
Next Animation ချစ်သူတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်မယ့် Animation ဇာတ်ကားကောင်းများ။